Mahotera: Bhizinesi rekufambisa mari pasi $ 59 bhiriyoni muna 2021
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hospitality Industry » Mahotera: Bhizinesi rekufambisa mari pasi $ 59 bhiriyoni muna 2021
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Kufamba kwebhizinesi kwave kunonoka kudzoka kubva kutanga kwedenda. Kufamba kwebhizinesi kunosanganisira kushandira pamwe, boka, hurumende, uye mamwe mapoka ezvokutengeserana. Bhizinesi rekufambisa mari haitarisirwi kusvika kune pre-denda kusvika muna 2024.
Indasitiri yehotera inofungidzirwa kupedzisa 2021 pasi zvinodarika $ 59 bhiriyoni mubhizimusi rekufambisa mari.
Indasitiri yehotera yakarasikirwa neinosvika madhora makumi mana nemasere emadhora mubhizimusi rekufambisa mari muna 49.
Kufamba kwebhizinesi ndiyo indasitiri yehotera sosi hombe yemari.
Indasitiri yehotera inofungidzirwa kupedzisa 2021 pasi pasi pe $ 59 bhiriyoni mumabhizimusi ekufambisa mari zvichienzaniswa ne2019, sekureva kwemushumo mutsva waburitswa nhasi. Izvo zvinouya mushure mekurasikirwa neinosvika madhora makumi mana nemasere emadhora mubhizimusi rekufambisa mari muna 49.
Kufamba kwebhizinesi ndiyo indasitiri yehotera sosi huru yemari uye yanga ichinonoka kudzoka kubva kutanga kwedenda. Kufamba kwebhizinesi kunosanganisira kushandira pamwe, boka, hurumende, uye mamwe mapoka ezvokutengeserana. Bhizinesi rekufambisa mari haitarisirwi kusvika kune pre-denda kusvika muna 2024.
Ongororo nyowani inouya pazvikamu zveongororo yeAHLA ichangoburwa, iyo yakawana kuti vafambi vazhinji vari kudzima, kudzikisa, uye kudzosera nzendo pakati pekukwira kwezviitiko zveECVID-19.
Kushaikwa kwekufamba kwebhizimusi uye zviitiko zvine mhedzisiro huru yekuwana basa, uye zvinosimbisa kudiwa kwekununurwa kwemubatanidzwa, kwakadai seSave Hotel Jobs Act.
Mahotera anotarisirwa kupera muna 2021 kudzika mabasa angangoita mazana mashanu ezviuru kana zvichienzaniswa ne500,000. Kune vanhu gumi vese vanoshanda zvakananga pahotera chivakwa, mahotera anotsigira mamwe mabasa makumi maviri nematanhatu munharaunda, kubva mumaresitorendi nekutengesa kumakambani anopa hotera - zvichireva kuti anowedzera anenge miriyoni imwe nemazana matatu. mabasa anotsigirwa nehotera ariwo panjodzi.
"Kunyange mamwe maindasitiri atanga kuwedzera kubva padenda iri, chirevo ichi chiyeuchidzo chekuti mahotera nevashandi vemuhotera vachiri kunetseka," akadaro Chip Rogers, mutungamiri uye CEO we American Hotel & Yekugara Association (AHLA).
“Kufamba nemabhizimusi kwakakosha mukushanda kwemaindasitiri edu, zvikuru mumwedzi yekudonha uye yechando apo kufamba kwekuzorora kunowanzo kutanga kudzikira. Kuenderera mberi kweCOVID-19 kunetsekana pakati pevafambi kunongowedzera matambudziko aya. Ndosaka yave nguva yekuti Congress ipfuure bipartisan Sevha Hotel Mabasa Mabasa kubatsira vashandi vemuhotera nevanamuzvinabhizimusi vadiki kupona dambudziko iri. ”
Kunyangwe iri pakati peakanyanya kurohwa, mahotera ndiwo chete chikamu chevashanyi neindasitiri yekuzorora vachiri kuwana rubatsiro rwakananga. Mahotera nevashandi vavo vakaratidza kushingirira kunoshamisa mukutarisana nematambudziko ezvehupfumi asina kumboitika, uye indasitiri inoda rutsigiro kubva kuCongress kuti ivezve nenjodzi.